Soo-saareyaasha Alaabada & Alaab-qeybiyeyaasha - Qeybta 2
Laba-Piece Heat Induction Is ...
Hal-xabbo kuleylka kuleylka ah Se ...
Feeraha Easy Aluminium bireed Ind ...
3-ply liners liners waxaa laga sameeyaa seddex lakab: xudunta xumbo khafiif ah ayaa lagu xoqay inta u dhaxeysa labada lakab ee filimka LDPE. 3-ply liner liner waxay u egtahay in loo isweydaarsado lakabka xumbada. Si kastaba ha noqotee, waxay dhab ahaantii qabataa wax ka fiican kan xumbada caadiga ah. Sida lakabka xumbada, tani sidoo kale ma abuureyso shaabad hawo-qaadasho ah.
Waa dhadhan iyo udgoon u adkaysta, waxayna leedahay heerka gudbinta qoyaanka oo hooseeya, taasoo macnaheedu yahay inay ka hortageyso qoyaanka inay galaan dhalada oo ay wax yeelaan sheyga.
Hal-xabbad oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh Filimka 'White PE Film'
Qaad 'N' Peel Aluminium Aluminium Wax-soo-saarista Khatimidii
Kani waa hal-shey shaashadda isku-xirka indha-indheynta, ma leh wax keyd ah ama lakab labaad, waxaa lagu dabooli karaa weelka mashiinka shaabadda induction ama birta korantada si toos ah. Waxay ku siin kartaa shaabad adag dhalada caagga ah ama weelka dhalada ah ayaa lagu wada saari karaa gabalka oo dhan, mana jiro wax haraaga oo ku yaal bushimaha weelka. Shaashadan xaragada induction way fududahay in lagu furo wiishka 'N'.